Dalal Afrikaan ah oo ku dhawaaqay in ay si deg deg ah ciidammo ugu soo dirayaan Somaliya. [Akhris …] – Radio Daljir
Dalal Afrikaan ah oo ku dhawaaqay in ay si deg deg ah ciidammo ugu soo dirayaan Somaliya. [Akhris …]
Seteembar 1, 2009 12:00 b 0
Tiriboli, Sept 01 – Dalalka Neyjeriya iyo Malaawi ayaa ku dhawaaqay si deg deg ah ciidammo ugu soo dirayaan Somaliya, si ay uga qeybqaataan daminta colaadaha Somaliya oo muddo dheer soo socday.
Mas?uuliyiinta dalalkaasi ayaa warkaan ka sheegey shirka madaxda midawga Afrika uga socda magaalada Tiriboli ee xarunta Liibiya, oo intiisa badan looga hadlayo dagaalada ka jira qaaradda Afrika gaar ahaan Somaliya iyo Sudan.
Midawga Afrika ayaa waxaa Somaliya ka jooga 4,300 oo askari kuwaasi oo taageera DKM ah oo ah dawlad milleteri ahaan aad u liidata, waxaa haddii tani rumawdo ay rajo galin doontaa Madaxweyne Shariif oo in badan codsaday in la soo dhameystiro ciidankii ay dawladaha Afrika u ballanqaadeen Somaliya oo gaarayey 8,000 oo askari.
In Somaliya loo diro ciidan hor leh waxa ay u baahantahay dhaqaale iyo dhabar adeyg ay la yimaadaan dalalka ciidamada diraya iyo kuwa dhaqaalaha ku taageera sida ay qabaan dadka siyaasadda odorosa.
Axmed Maxamed (Tallman)
Weriye Batuun oo aan ka waraysanay mudaharaado ka dhacay Hargeysa. [Dhegaysi …]